ဆွဲဆောင်မှုအရှိဆုံး Webcasting လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများကိုMatrox® Monarch EDGE ဖြင့်ထောက်ပံ့ခြင်း | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Matrox®ဧကရာဇ် EDGE နှင့်အတူအများစုမှာသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော webcasts Workflows Powering
Matrox®ဧကရာဇ် EDGE နှင့်အတူအများစုမှာသိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသော webcasts Workflows Powering
အွန်လိုင်းဗီဒီယိုနှင့် over-the-ထိပ်တန်းပလက်ဖောင်း (OVPs နှင့် OTTs) အဆက်မပြတ်ဖြစ်ပေါ်နေသောနေကြသည်။ အသုံးပြုသူများ webcasts တီထွင်မှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်၏အားသာချက်ကိုယူပြီးအားဖြင့်ထွက်ရပ်နိုင် - Desktop ပေါ်မှာ, မိုဘိုင်းနှင့်စမတ်တီဗီ web-based ကိုဗီဒီယိုကစားသမားအပေါ်ထောက်ခံ - ထိုသို့သော High-frame rate ကို (HFR) 4K, 4K 360 VR နှင့် Multi-ကင်မရာရွေးချယ်ရေးအဖြစ်။ Matrox ဧကရာဇ် EDGE, ဒီနေ့ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့တိုက်ရိုက်လွှင့် Workflows အပေါ်ယူဖို့ဒီဇိုင်းကြံ့ခိုင် low-အောင်းနေချိန်နှင့်အတူထုတ်လွှင့်နှင့်အခြားဗီဒီယိုအားပညာရှင်များသည်နှင့်ပြောင်းလဲနေသော H.264 encoding ကကျစ်လျစ်အတွက်ထုပ်ပိုးစွမ်းရည်နိမ့်-power, ခရီးဆောင်ပစ္စည်း။
အဆိုပါ H.264 codec ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာကို web အလှူငွေနှင့်တိုက်ရိုက်လွှင့်အဘို့ကိုလက်ခံသည်။ အားလုံးအရည်အသွေးအစွန့်ခြင်းမရှိဘဲအောင်းနေချိန်အသေးအဖွဲအနေဖြင့်ဧကရာဇ် EDGE ရဲ့ထူးခြားတဲ့အကောင်အထည်ဖော်မှုဒေတာနှုန်းအတော်လေးနိမ့်တတ်၏။ input ကိုတစ်ဦးလျှင်ဧကရာဇ် EDGE ရဲ့လွတ်လပ်သော encoding ကစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်မျိုးစုံနေရာများမှစီးဆင်းရန် configured နိုင်ပါသည်။ သာယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ audio သေချာစေရန်တစ်ဦးအစွမ်းထက်အတိုင်းအတာနှင့် de-interlacing အင်ဂျင်တစ်ခုချင်းစီမှစစ်ဆင်ရေးအကျိုးကျေးဇူးများကို encoded နေကြသည်။
Workflows တစ်များပြားလှဖြေရှင်းရန်နိုင်စွမ်း, ဧကရာဇ် EDGE သည့်မရေမတွက်နိုင်သော application များနှင့် H.264 codec ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရရှိနိုင်မှုနှင့်အတူပေါင်းစပ်မတူနိုင်တဲ့, ကြံ့ခိုင် encoding ကအာဏာကိုကယ်တင်တတ်၏။ ဧကရာဇ် EDGE ရဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းဒီဇိုင်းကိုတစ်ဦးယင်ကောင်-pack ကိုအတွက်တပ်ဆင်မှုအတွက်ကြောင့်စံပြစေသည်, OB ဗန်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦး 1RU-ထိန်သိမ်းအာကာသအတွင်းတစ်စက္ကန့်ဧကရာဇ် EDGE ယူနစ်နှင့်အတူ။ ၎င်း၏ 4K UHD / Multi-HD သွင်းအားစုတွေဖြစ်တဲ့အားကစားဖြစ်ရပ်များနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲအဖြစ်မျိုးစုံကင်မရာ feeds တွေကိုကဖုံးလွှမ်းမဆိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်ရပ်အတွက်ဧကရာဇ် EDGE စံပြပါစေ။ high-သိပ်သည်းဆ encoding ကပလက်ဖောင်းအဖြစ်, ဧကရာဇ် EDGE လေးလွတ်လပ်သောလက်ခံနိုင်ပါသည် HD သွင်းအားစုများနှင့် input ကိုနှုန်းမျိုးစုံစီး Deliverable အလယ်ပိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများအခန်းထဲမှာတပ်ဆင်ဘို့သင့်လျော်အောင်။
ထွန်းသစ်စ Workflows ဖြေရှင်းရန်
ဧကရာဇ် EDGE ထိုကဲ့သို့သော 4K UHD အတွက်အကြောင်းအရာများအတွက်ဝယ်လိုအားမှဖြည့်တင်းသောသူတို့ကိုအဖြစ်ယနေ့ထွန်းသစ်စ webcasts Workflows, ကိုင်တွယ်များအတွက်ကောင်းစွာ-သင့်လျော်သည်။ အကောင်းဆုံးသြဇာဧကရာဇ် EDGE ရဲ့ High-frame ကို-နှုန်း 4K UHD encoding ကစွမ်းရည်နိုင်ဖို့အတွက် webcasts သူတို့ရဲ့ 4K UHD ကင်မရာနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများကို အသုံးပြု. ဗီဒီယိုကိုဖမ်းယူသင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခု OVP ဖို့ဧကရာဇ် EDGE-encoded ဗီဒီယိုကိုမကယ်မလွှတ်။ ထိုအရပ်မှ, webcasts အဆိုပါ OVP downscaling ဂရုစိုက်ပါစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းပြချက် 4K UHD ထက်နိမ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေအတွက်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏ feeds တွေကိုသေးငယ်တဲ့ screen များအတွက်စံပြဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ် TV ကိုသူ့ဟာသူ upscaling အကြောင်းအရာမှာပေးပို့ရပါမည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ရလဒ်ပိုကြီးတဲ့, 4K UHD-နိုင်စွမ်းတီဗီ screen များအတွက်လျော့နည်း-ထက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်, ဖြစ်ပါတယ် အနိမ့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ။ စီး OVPs မှ 4K UHD အတွက်ကယ်နှုတ်ကြသောအခါထို OVPs သေးငယ်တဲ့ဖန်သားပြင်နေဆဲခြွင်းချက်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်ဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့သော Laptop, Tablet နှင့်စမတ်ဖုန်းများအဖြစ်အသေးမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားများအတွက်ပိုကောင်းအောင် downscaling ကိုင်တွယ်ပါလိမ့်မယ်။ ဧကရာဇ် EDGE အသုံးပြုခြင်း, webcasts ဆိုမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့အရည်အသွေးကဗီဒီယိုကယ်မနှုတ်နိုင်နှင့်ကြည့်ရှုသူများ webcasts ရည်ရွယ်သည်ဟုအရည်အသွေးကို၏သာလွန် Level ဖြင့်နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်မြင်လိမ့်မည်။
ဧကရာဇ် EDGE webcasts 4K UHD ပေးပို့တိုးမြှင့်ကူညီနိုင်သည့်အတွက်အခြားသောလမ်းအသုံးပြုသူများကို 4K UHD အတွက်ဖမ်းယူခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအများအပြားကွဲပြားခြားနားသော OVPs မှမျိုးစုံကွဲပြားခြားနားသည် frame အရွယ်အစားအတွက်ကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုရတတ်၏။ နေဆဲ Wowza ကဲ့သို့အခြား OVPs သို့မဟုတ်မီဒီယာဆာဗာများကိုသွားနိုင်သည်ကိုအပိုအကျိုးရလဒ်များရှိခြင်းစဉ် - ဥပမာအားဖြင့်, ဧကရာဇ် EDGE က၎င်း၏အကြံပြု 720p ၏ resolution နဲ့ 4K UHD တွင် YouTube မှတစ်ချိန်တည်းမှာ, စမ်းချောင်းမှာ Facebook ကမှစီးဆင်းရန်ဖြစ်နိုင်စေသည်။ အစားမျိုးစုံလိုအပ်ကြောင်း Workflows များအတွက် HD feeds တွေကို, ဧကရာဇ် EDGE မျိုးစုံကုဒ်သွင်းနိုင်စွမ်း HD မကြုံစဖူးလက်လှမ်းမမီခြင်းနှင့်ထိတွေ့မှုအနည်းဆုံး 16 ကွဲပြားခြားနားသောနေရာများမှကယ်နှုတ်ခံရဖို့စီး။ webcasts သူတို့ရဲ့လက်လှမ်းမမီတိုးချဲ့နှင့်သူတို့ရှိနေတဲ့နေရာဟာသူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဧကရာဇ် EDGE ရဲ့အစွမ်းထက် encoding ကအင်ဂျင်၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုစက်ပေါ်ရှိလေးညှိသွင်းအားစုနှင့်အတူ, ဧကရာဇ် EDGE ကိုအလွယ်တကူသို့ fit နှင့် YouTube ကဲ့သို့အ OVPs ၏ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Multi-ကင်မရာအတွေ့အကြုံများအဘို့အကြောင်းအရာများကို webcasts Workflows တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ
ပလက်ဖောင်းယခုအသုံးပြုသူများကသူတို့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာ watch အဖြစ်ရွေးချယ်မျိုးစုံကင်မရာထောင့်အကြားပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းပေးထားပါတယ်။ ထို့အပြင်စျေးကွက် officiating နည်းပြနှင့်အားကစားပစ်မှတ်ထားအထူးပြုမီဒီယာဆာဗာများမှာလည်း၎င်းတို့၏ Multi-ထောင့်ပြန်ကန်နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ပလက်ဖောင်းကျွေးမွေးဖို့ဧကရာဇ် EDGE ရဲ့လေးညှိသွင်းအားစု၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ ဧကရာဇ် EDGE ပြီးသားသူတို့ရဲ့ In-ပွဲဗီဒီယိုပြန်လည်ပြသခြင်းဖြေရှင်းချက်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် trialed နှင့်နိုင်ငံတကာထိပ်တန်း-tier အသင်းအဖွဲ့ဘောလုံးနှင့်ရပ်ဂ်ဘီအသင်းများကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
streaming များ protocols များအမျိုးမျိုးကိုထောကျပံ့ဖို့ဧကရာဇ် EDGE ရဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်နှစ်ဦးစလုံးဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဒေသဆိုင်ရာကွန်ရက်များအသုံးပြုနှစ်ဦးစလုံး Workflows သို့ချောမွေ့စွာ fit မှခွင့်ပြုပါတယ်။ အတော်များများက OVPs နှင့်မီဒီယာဆာဗာများပွင့်လင်းကွန်ရက်များပေါ်တွင်အသုံးပြုရန်အောင်းနေချိန်လျှော့ချနေစဉ်, SRT, အစဉ်အဆက်-လူကြိုက်များ RTMP format ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းအသစ်တခုက open-source streaming များ protocol ကိုထောကျပံ့ဖို့စတင်နေကြသည်။ local network များတွင်, webcasts သူတို့ရဲ့ Workflows လိုအပ်အရာပေါ်မူတည်ပြီး MPEG-2 TS သို့မဟုတ် RTSP ရွေးနိုင်သည်။
ရိုးရာ linear programming ကိုကကမ်းလှမ်းကြောင်းထက်ကျော်လွန်ကာအတှေ့အကွုံပို့, ဧကရာဇ် EDGE ကဗီဒီယိုပညာရှင်များဆိုမျက်နှာပြင်အရွယ်အစားဆွဲဆောင်မှုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအကြောင်းအရာစီးဆင်းခွင့်ပြုပါရန်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ-ဖြစ်ရပ်-webcasts တီထွင်မှုအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်ပေါ် capitalizes ။ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Multi-ကင်မရာအွန်လိုင်းအတွေ့အကြုံများ powering မှစ. မည်သည့်အားကစားအဖြစ်အပျက်၏ပြင်ပမှာပြန်ကန် tools များနှင့်အတူနည်းပြတပ်ဆင်ခြင်းရန်, ဧကရာဇ် EDGE ယနေ့အများဆုံးဖြစ်မည် webcasts Workflows အပေါ်ယူရန်စံပြ encoding ကပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
main features တွေ
·လေး SDI သွင်းအားစု (331G x, 12G x)
· DisplayPort preview ကို (တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ် quad mode ကို)
· Professional က Analog စသို့မဟုတ်ပါဝင်သောအသံဖိုင်
· Genlock output ကို
· Dual-GigE ကွန်ယက်ကို connectors
· Compact 1RU တစ်ဝက်-width ကို
အဆင့်အတန်းနှင့် configuration များအတွက်·တပ်ဦး panel က
· Matrox ဧကရာဇ် EDGE ထိန်းချုပ်ရေး Hub ကို Windows application ကိုအပျနှံခဲ့
ပိုမိုသိရှိလိုပါက, ခရီးစဉ် matrox.com/video/edge/broadcast-beat
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ CES2017 အထောက်အပံ့ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor MStar အသံလွှင့်ကုန်တင်ကားအပြင်ဘက်တွင် SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2019-06-14
ယခင်: အသံလွှင့် Post ကို-ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဝေးလံခေါင်သီဖြစ်နိုင်သော
နောက်တစ်ခု: PBT အီးယူကို client Club တီဗီ Ibiza နှင့် Formentera အတွက်မိတ်ဆက် -